I-Omega Drill yakwaSirayeli ilingisa ukuqhambuka kohlobo olutsha lwe-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-Israel Iphula Iindaba » I-Omega Drill yakwaSirayeli ilingisa ukuqhambuka kohlobo olutsha lwe-COVID-19
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • abantu • Xanduva • News Sustainability • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-Omega Drill yakwaSirayeli ilingisa ukuqhambuka kohlobo olutsha lwe-COVID-19.
Idunyiswe njengendawo yokuqala yehlabathi yi-ofisi kaBennett, imidlalo ijonga ukulungela izithintelo zexesha elizayo kwiindibano kunye nokunyakaza, ukuvalelwa yedwa kunye nemigaqo-nkqubo yokutshixa, kunye novavanyo lokongamela kunye nezilumkiso eziza kukhutshwa njengoko kuphuhliswa uhlobo olutsha. I-drill ikwavavanya iimpendulo zezibhedlele, kunye nokulungela kwamanye amacandelo.
Ukulinganisa kubhengezwe kwi-Twitter yiNkulumbuso uNaftali Bennett ngoLwesithathu.
U-Bennett uye wabhekisa rhoqo 'kwi-Omega strain' ukuchaza uguqulo lwentsholongwane olulandelayo olungekafunyaniswa.
Uqeqesho olukhokelwa ngumphathiswa wezokhuselo lwakwaSirayeli lwenzelwa kwigumbi leemeko kwiZiko loLawulo leSizwe eYerusalem.
Urhulumente wase-Israeli ubhengeze ukuphehlelelwa koqheliselo lokuziqhelanisa kwilizwe liphela ngendlela 'yokuziqhelanisa nokulwa' ukuvavanya ukulungela kwelizwe ukuqhambuka kohlobo olutsha olungaziwayo lwentsholongwane ye-COVID-19.
Sirayeli 's Usosiba jikelele U-Naftali Bennett, obesoloko ebhekisa kutshintsho lwentsholongwane olulandelayo, olusaza kufunyanwa, njenge 'Omega strain', ubhengeze umthambo obizwa ngokufanelekileyo ngokuba 'yi-Omega drill' ngoLwesithathu.
Uqeqesho olukhokelwa ngumphathiswa wezokhuselo lwakwaSirayeli lwenzelwa kwigumbi leemeko kwiZiko loLawulo leSizwe eYerusalem. Lo msebenzi ubeka amaziko elizwe kunye nee-arhente zikarhulumente ngesantya sazo ukubona ukuba bangakwazi na ukujongana nohlobo olutsha olubulalayo lwe-COVID-19.
Ngelixa kwezinye iindawo emhlabeni, imeko ye-coronavirus iya isiba mandundu, u-Israyeli ukhuselekile kwaye ukhuselekile,” utshilo uBennett. "Ukugcina oku, kwaye siqhubeke nemisebenzi yethu yemihla ngemihla, kufuneka sigcine umnwe wethu kwi-pulse kwaye silungiselele nayiphi na imeko."
The Usosiba jikelele dumisa Sirayeli 'Impendulo kubhubhane, ibhengeza ukuba urhulumente "ukwimeko entle kakhulu" ebethe igagasi lakhe lesine losulelo, esongeza ukuba "sele liza kushiya iDelta [ukwahluka] ngasemva."
Sirayeli yaba lelinye lamazwe okuqala ukukhupha iskimu sokugonya i-booster ehlotyeni, siqala ngabantu bakhona abadala kunye nokusebenza phantsi kwamanye amaqela eminyaka. UBennett ulincomile eli cebo, ebhengeza ukuba u-Israyeli “wayenguvulindlela wethamo lesithathu” ngokuchasene ne-COVID.
I-Omega Drill yakwaSirayeli ilingisa ukuqhambuka kohlobo olutsha lwe-COVID-19-NgeGazi leMvana. uthi:
Novemba 28, 2021 kwi-15: 22